Nne a bibiri ebibi na-akọghachi oge ikpeazụ nke ezinụlọ ya tupu mmiri mmiri tara akpụ - SANTE PLUS MAG - TELES RELAY
Geraldine Mullan enweela nsogbu kachasị njọ na ndụ ya. E nwekwara ezigbo ihe mere di ya, bụ́ John, ji gbaa naanị afọ iri anọ na itoolu mgbe ọ nwụrụ n’ihe ọghọm. Mụ ya abụọ, Tomás, 14, na Amelia, 6 nwụrụ anwụ n'ihe nkiri a. Taa, nwanyị na-agba ndị gbara ya gburugburu ume ka ha gosi ndị ha hụrụ n'anya.
Gbọ ala ahụ mgbe mmeghachi omume mberede- Isi mmalite: North West Newspix
Gbọ ala ahụ rutere na mmiri
Mgbe ya na ezinaụlọ ya rutere otu ọmarịcha ụbọchị, o were sekọnd ole na ole ka ọ gbanwee ndụ ya ruo mgbe ebighị ebi. Geraldine Mullan bu di ya na umuaka ya abuo mgbe ugbo ala ahu rutere n’osimiri. N’ụzọ dị mwute, ọ dịghị onye jisiri ike gbapụ belụsọ nne. Kwuru site The Independent, ọ na-echeta oge ikpeazụ ndị a na ụlọ ọrụ John, Tomás na Amelia. “Ihe niile megidere anyị. Ebili mmiri dị elu, mmiri dị n'okporo ụzọ ahụ, ọrụ owuwu yana ihe egwu nke ịmịcha n'okporo ụzọ. John na-akpachapụ anya karịa ndị ọkwọ ụgbọala. Enweghị ịgba ọsọ ma ọ bụ akpachapụghị anya ịkwọ ụgbọala, ”ka Geraldine na-agba akaebe. O di nwute, akara aka gha adi uzo ozo.
Ọnọdụ nke ihe ọghọm - Isi mmalite: Joe Boland / PA Waya
“Enweghị m azịza”
Mgbe nwanyị ahụ chetara n'abalị ahụ, ujo ahụ ka dịkwa oke. “Enwere m ike iji anya nke uche hụ anyasị, nke abụọ site na abụọ. N'ime sekọnd ole na ole, ndụ anyị agbanweela kpamkpam. Na 21:30 pm na Thursday August 20, ndụ m gbanwere n'ụzọ na-akawanye njọ, "ọ na-ekwu. Ọ na-ekwu na ụgbọ ala ahụ mikpuru n'ime mmiri na di ya enweghị ike ịtọhapụ onwe ya n'ihi mmerụ ahụ site na ujo ahụ. Ọ na-agbakwụnye na nwa ya nwoke bụ ezigbo nwanne nwanne Amelia, ọbụlagodi n'oge ikpeazụ ha. "Onye ọ bụla maara na Tomás bụ ezigbo nwanne nwoke na mgbe ndị na-egwu mmiri hụrụ ya aka ha gburugburu nwanne ya nwanyị," ka Geraldine na-ekpughe.
Olili ozu - Isi mmalite: Independent
Atụ na-emetụ n'ahụ di ya
N'ịbụ onye ọnwụ nke onye ọ kpọrọ di na ezigbo enyi ya nwere, nwanyị ahụ na-ekerịta ozi na-akpali akpali iji na-asọpụrụ ya. Ọ na-ekwu na'ọ na-akwado ịfụcha kandụl 50 ya n'ime izu abụọ nakwa na o zobere obere onyinye 50 n'ụlọ niile. "Ugbu a enweghị m onye m ga-enye ha, mana m ga-aga ebe a na-eli ozu ma bụkuo ya ụbọchị ọmụmụ obi ụtọ," ka o kwuru na mmetụta. Ọ kwụkwara ụtụ maka ndị nnapụta gbara mbọ na-akpọpụta ya na mmiri. Ọ sịrị na ọ kpọrọ ha iyi ka ya hapụ ndị ezinụlọ ya ka ha nwụọ inyere ya aka.
Ọbịbịa enyemaka - Isi mmalite: Steven McAuley / McAuley Multimedia
Mgbe ọdachi ahụ gasịrị, nne a obi gbawara kpọọ onye ọ bụla nọ na olili ozu ka ọ lọta ma nye ndị ha hụrụ n'anya aka, na-agwa ha etu ha si hụ ha n'anya. Ozi yiri nke a papa nke mgbe ụmụ ya 3 nwụsịrị akpọ maka "ịkụkọta ha oge niile dị ka o kwere mee".
Etu esi ewughachi mgbe nsogbu gachara?
Mgbe anya mmiri, iru uju, nghọta na iwe gasịrị, onye ahụ na-eru uju ga-eji nwayọ nwayọ gosipụta ike ya iji wee wughachi nke ọma. Na ezi ihe kpatara ya, nwatakịrị na-efunahụ gị maka ndụ na ihe mgbu dị mkpa karịa mgbe ọ gụnyere ọnwụ nke di ma ọ bụ nwunye. Ọ bụ ezie na usoro ịgwọ ọrịa adịghị nwayọ ma dịkwa mgbagwoju anya, ị makwaara na onye ọ bụla ga-ahụ ihe omume a na-emebi ihe n'ụzọ nke ha na etu o siri dị. Anyị niile nwere njem nke anyị, nke ga -eduba anyị banye na akụrụngwa metụtara agwa anyị, oge nwata anyị ma ọ bụ akụkọ ndụ anyị. Ndị enyi na ndị mmụọ na-enwe mmetụta uche na-ekerekwa òkè dị ukwuu na ịpụ na ya, na-atụtaghị oge na-agwọ ọnyá site na ịkọwa ihe nkiri anyị na-eche ihu.
Edemede a pụtara na mbụ https://www.santeplusmag.com/cette-maman-devastee-raconte-les-derniers-instants-de-sa-famille-avant-une-noyade-tragique/
Ali Gounabi, dị afọ 33, na-arụrụ onwe ya ọtụtụ okpu